ချစ်ရတဲ့ သူငယ်ချင်း အလင်းရောင်ရဲ့ မွေးနေ့အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေး ပြောလိုက်တဲ့ဖွေးဖွေး - Cele Connections
ချစ်ရတဲ့ သူငယ်ချင်း အလင်းရောင်ရဲ့ မွေးနေ့အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေး ပြောလိုက်တဲ့ဖွေးဖွေး
ဖွေးဖွေးနဲ့ အလင်းရောင်တို့က ဒါရိုက်တာ ဝိုင်းရဲ့ သားတပည့်များပီပီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ တော်တော်များများကို အတူတူ ရိုက်ကူးခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွေးဖွေးတို့နှစ်ယောက် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ “သတို့သမီး”၊ “ပပဝတီ စီရင်ခန်း”၊ “သမတ္တကြီးထံပေးစာ”၊ “ရွှေကြာ” ဇာတ်ကားတွေကလည်း အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်အားပေးခြင်းကို တစ်ခဲနက်ခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ဧပြီလ (၂၂) ရက်နေ့ကတော့ မင်းသားချော အလင်းရောင်ရဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်သူ ဖွေးဖွေးက သူမရဲ့ သူငယ်ချင်းအတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးထားပါတယ်။
” ဟက်ပီးဘတ်​ဒေး အလင်း​ရောင် !! ပွဲတက်ပုံ​တွေ ရိုက်ကွင်းပုံ​တွေမတင်​တော့ဘူး။ “ကံ့​​ကော်နီ” ရိုက်အပြီး ခွက်ပုန်းကစ်​နေကြပုံ​လေးပဲတင်လိုက်တယ်။​ခုလိုကာလမှာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တခါမှမကြုံဘူး​သေးတဲ့အ​တွေ့အကြုံနဲ့အတူ အ​တွေးသစ် စိတ်ကူးသစ်​တွေ ​တွေ့ချင်တာ​တွေ ထပ်​တွေ့ပါ​စေ။” ဆိုပြီး ဖွေးဖွေးက ဆုတောင်းပေးထားပါတယ်။
ဖွေးဖွေးနဲ့ အလင်းရောင်တို့ သရုပ်ဆောင်ထားကြတဲ့ “ကံကော်နီ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကလည်း မကြာခင် ရုံတင်ပြသတော့မှာမို့ ဆက်ဆက်အားပေးဖို့ မမေ့ကြပါနဲ့နော်။ ပရိသတ်ကြီးကလည်း အလင်းရောင်အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေး ပြောပေးခဲ့ကြပါဦး။
ခဈြရတဲ့ သူငယျခငျြး အလငျးရောငျရဲ့ မှေးနအေ့တှကျ မှေးနဆေု့တောငျးစကားလေး ပွောလိုကျတဲ့ဖှေးဖှေး
ဖှေးဖှေးနဲ့ အလငျးရောငျတို့က ဒါရိုကျတာ ဝိုငျးရဲ့ သားတပညျ့မြားပီပီ ရုပျရှငျဇာတျကားတှေ တျောတျောမြားမြားကို အတူတူ ရိုကျကူးခဲ့ရတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖှေးဖှေးတို့နှဈယောကျ သရုပျဆောငျထားတဲ့ “သတို့သမီး”၊ “ပပဝတီ စီရငျခနျး”၊ “သမတ်တကွီးထံပေးစာ”၊ “ရှကွော” ဇာတျကားတှကေလညျး အောငျမွငျမှု ရရှိခဲ့ပွီး ပရိသတျတှရေဲ့ ကွိုကျနှဈသကျအားပေးခွငျးကို တဈခဲနကျခံခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီကနေ့ ဧပွီလ (၂၂) ရကျနကေ့တော့ မငျးသားခြော အလငျးရောငျရဲ့ မှေးနဖွေ့ဈသူ ဖှေးဖှေးက သူမရဲ့ သူငယျခငျြးအတှကျ မှေးနဆေု့တောငျးပေးထားပါတယျ။
” ဟကျပီးဘတျဒေး အလငျးရောငျ !! ပှဲတကျပုံတှေ ရိုကျကှငျးပုံတှမေတငျတော့ဘူး။ “ကံ့ကျောနီ” ရိုကျအပွီး ခှကျပုနျးကဈနကွေပုံလေးပဲတငျလိုကျတယျ။ခုလိုကာလမှာ ဘာပဲဖွဈဖွဈ တခါမှမကွုံဘူးသေးတဲ့အတှအေ့ကွုံနဲ့အတူ အတှေးသဈ စိတျကူးသဈတှေ တှခေ့ငျြတာတှေ ထပျတှပေ့ါစေ။” ဆိုပွီး ဖှေးဖှေးက ဆုတောငျးပေးထားပါတယျ။
ဖှေးဖှေးနဲ့ အလငျးရောငျတို့ သရုပျဆောငျထားကွတဲ့ “ကံကျောနီ” ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးကလညျး မကွာခငျ ရုံတငျပွသတော့မှာမို့ ဆကျဆကျအားပေးဖို့ မမကွေ့ပါနဲ့နျော။ ပရိသတျကွီးကလညျး အလငျးရောငျအတှကျ မှေးနဆေု့တောငျးစကားလေး ပွောပေးခဲ့ကွပါဦး။
“Covid19အန္တရာယ်မှ မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်ခြင်းဖြင့် ကူညီပါဆိုပြီ တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့မိစန္ဒီ”
“လှပလွန်းသူ ချစ်ဇနီးလေး ရွှေမှုန်ရတီနားကနေ မခွာဘဲ ချွဲစိန်လေးလုပ်နေတဲ့ ရွှေထူးရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်”
သင်္ကြန်မှာမကလိုက်ရတဲ့အတွက် အိမ်တွင်းအောင်းပြီး ပရိသတ်တွေကို ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိကပြခဲ့တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
“ဒီကနေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ သမီးအကြီးဆုံးဧရာဝတီလူမင်းရဲ့(၁၂)ပြည့်မွေးနေ့လေးကို ဖခင်မေတ္တာအပြည့်နဲ့မွေးနေ့ဆုမွန်တောင်းပေးလိုက်တဲ့ လူမင်း”